Xoogagii Gorgor ee ka dagaalamay Dhuusamareeb oo magaalada laga saaray | Dhacdo
Home Wararka Maanta Xoogagii Gorgor ee ka dagaalamay Dhuusamareeb oo magaalada laga saaray
Xoogagii Gorgor ee ka dagaalamay Dhuusamareeb oo magaalada laga saaray
Gudoomiyaha Degmada Dhuusamareeb, Macalin Cabdiraxmaan Cali Maxamed (Geeda-qorow) ayaa sheegay in la dhameeyay shaqaaqadii maalin ka hor ka dhacday magaaladaasi.
Shaqaaqadan ayaa u dhaxeysay Booliska Galmudug iyo Kumaandooska Gorgor oo Talaadadii ku wada dagaalamay Bartamaha Magaalada Dhuusamareeb, iyadoo iska horimaadkaasi uu sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh.
Gudoomiyaha Degmada Dhuusamareeb ayaa sheegay in iska horimaadka labada ciidan uu ka dambeeyay, markii uu is fahan-waa soo kala dhexgalay, sida uu yiri.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay inaanay jirin xiisad horey uga dhaxeysay labada ciidan, haddana ay ku guuleysteen inay isku keenaan, oo gacmahana isku saaraan.
Waxa uu intaa ku daray in Ciidanka Kumaandooska Gorgor laga saaray Magaalada Dhuusamareeb, isagoona rajo ka muujiyay in isku dhacaasi aanu ku soo laaban magaalada.
Mar uu ka hadlayay khasaaraha nafeed ee ka dhashay isku dhacaasi ayuu sheegay in gabar yar ku dhimatay, halka laba askarina ay ku dhaawacantay.
“Gabar yar oo shacab ah ayaa dhimatay, waan ka tacsiyeynaynaan, sidoo kale laba askari oo kalena waa dhaawacantay. Baabuur waddada mareysay xabado ayaa ku dhacay, sidoo kale leyrkii magaalada meelo ka mid ah ayaa wax gaaray, oo xoogaa khasaaro fiilooyinkii magaalada dhex marayay iyo haamankii waaweynaa ay ku tallaal-naayeen qaar rasaastu haleeshay ayaa jira.” Ayuu yiri Gudoomiye Geeda-qorow.
Maadaama uu khasaaro dhacay, sida uu sheegay Gudoomiye Geeda-qorow waxaa arrintaasi baari doonta Xeer Ilaalinta Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida, si sharciga loo horkeeno kuwii ka masuulka ahaa, loona ciqaabo, iyaguse ay xaliyeen si colaad dambe uga dhex dhicin ciidamada.
Iska horimaadkan ayaa muddo saacado ah hakiyay isku socodkii dadka iyo gaadiidka iyo weliba dhaqdhaqaaqii ganacsi ee magaalada.
Previous articleBeelihii ku dagaalamay Saax-maygaag oo xabad joojin aqbalay (SAWIRRO)
Next articleDriest conditions in Ethiopia and Somalia seen in forty years threaten the wellbeing of millions